New Generation Tattoo Studio | Hlaingtharya | Yangon | yathar Beauty
New Generation Tattoo Studio
地址 အမှတ် (6) ရပ်ကွက် အောင်မြေသာယာဘုရားလမ်း ဘုတ်ဆုံမမှတ်တိုင် ခြံ အမှတ်361. 6ထပ်ကွန်ဒို မြေညီထပ်, Hlaingtharya, Yangon
種類 身體部位穿環 , 刺青 , 去除紋身
အမှတ် (6) ရပ်ကွက် အောင်မြေသာယာဘုရားလမ်း ဘုတ်ဆုံမမှတ်တိုင် ခြံ အမှတ်361. 6ထပ်ကွန်ဒို မြေညီထပ်, Hlaingtharya, Yangon